काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र कुमारी क्यापिटल लिमिटेड बीच शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि सम्झौता भएको छ । आज एक कार्यक्रमका बीच वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमेश आचार्य र कुमारी क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख संचालन अधिकृत पुष्प शर्माले...
महुली र नवकिरण लघुवित्तको एकीकृत कारोबार मंसिर ८ गतेबाट
काठमाण्डौ । दुई लघुवित्त आपसमा मर्ज भई बनेको महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आउँदो मंसिर ८ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ। महुली लघुवित्तले नवकिरण लघुवित्तलाई गाभेको हो। दुवै लघ्ुवित्तको गत वैशाख १७ गते सम्पन्न विशेष साधारणसभाले आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई टुंगो लगाएको थियो। आज शुक्रबार बसेको दुवै...
निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढ्दा निर्धन उत्थानको घाटा रु. २७.९२ करोड, ईपीएस पनि रु. १८.६२ ले ऋणात्मक
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। संस्थाको बुधबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा २२९.०९ प्रतिशतले घाटा व्यहोर्नुपरेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन...
प्रथम त्रैमासमा गुडविल फाइनान्सले कति कमायो ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा गुडविल फाइनान्स लिमिटेड (वित्तीय संस्था) को खुद नाफा १३९.२२ प्रतिशतले बढेको छ। कम्पनीको बुधबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा खुद नाफा २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १ करोड २१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा...
आईसीएफसी फाइनान्स : सञ्चालन मुनाफा बढ्दा नाफामा उछाल, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडको खुद नाफा २०६.५० प्रतिशतले बढेको छ। कम्पनीको बुधबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा खुद नाफा ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको...
कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले पाउनेछन् आरएमडीसी लघुवित्तको २०% लाभांश ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तावित लाभांश वितरण र २२ औँ वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयर दाखिला खारेज (बुक क्लोज) को मिति तय गरेको छ। आरएमडीसी लघुवित्त सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले आउँदो मंसिर ८ गतेदेखि मंसिर २२ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको...
सूर्योदय लघुवित्तको नाफा घट्यो, ईपीएस रु. २२
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको खुद नाफा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। मंगलबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १६.५८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
प्रथम त्रैमासमा महुली लघुवित्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको खुद नाफा २६.९९ प्रतिशतले बढेको छ। मंगलबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ८३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको �...
विजय लघुवित्तको नाफा घट्यो, रिजर्भ बढ्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको खुद नाफा २१.५८ प्रतिशतले घटेको छ। मंगलबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा...
आरएसडीसी लघुवित्तको नाफा बढ्यो, सञ्चालन मुनाफा घट्यो
काठमाण्डौ । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको मंगलबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा यो खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २३.२८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा...